Kuwo wonke umkhaya kuza isikhathi lapho ingane uya kuholele sabaqalayo. Izingane eziningi kalula ukujwayela ukuba indawo entsha kanye imvelo, kodwa kakhulu akakwazi ngokushesha ukwamukela ushintsho olunjalo. Ngakho-ke, kukhona ezinye nobunzima, okuyinto kungagwenywa ngokulungiselela kahle ingane nokugcina izimo ezithile ukuxhumana naye.
Ngokuvamile, lithathelwe ingane enkulisa kulula uma ingane kokukubuyisela engu emi-3 kuya 5. Lokhu kuyisikhathi esihle kakhulu ingane ukuqonda zonke izinzuzo engadini kanye nokufinyelela izingane, futhi zijwayele imvelo entsha. Ukujwayela Sadiq akufanele aqale ngemuva kokuthi ingane usephumile embundwini yayo ngokuthi "kindergartner", ngaphambi nje ukuthi. Umama kufanele kancane kancane accustom ingane umqondo engadini, ukuze uyibonise, ukukhuluma mayelana izimfanelo evakashile. Sekusele inyanga eyodwa umama wayezobanika ukuba ingane, yena kufanele bachithe isikhathi esincane naye kunokujwayelekile. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi ingane ukujwayela umbono yokuntuleka umama isikhathi esithile.
Kuyadingeka ukuba ubuyekeze isikhathi ukuqinisekisa ukuthi ingane ine okuvelayo omuhle enkulisa: uyaziqhenya wenzalo yabo (he is a big, ngakho-ke akwazi ukuwela embundwini enkulisa), bonisa indlela izingane ukudlala khona futhi enzani. Nokho, Ungeqisi it: ungakhulumi ushintsho oluzayo njalo, ukuze singathwesi nomkhwezeli.
Ukuze lithathelwe ingane enkulisa waya ngaphezulu ngempumelelo, kaningi zidinga ukuba nengane zomphakathi, phakathi kokubili abadala kanye nezingane: uhambo, ukuvakashela amapaki, endaweni zezingane, lapho isixuku esikhulu izingane. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi ingane akesabi inkhulumomphendvulwano nokufinyelela kuye.
Futhi lithathelwe izingane kuxhomeke kakhulu okukhethayo lesikhungo futhi uthisha, ogama iqembu uyingane yakho. Lapho ekhetha enkulisa kubalulekile ukuhlola yangaphakathi nempahla egumbini ngokuvamile futhi ikakhulukazi eqenjini. Noise, uhleko nokushaywa injabulo - izici eyinhloko kokulahla isimo. Uma ngesikhathi kuhambele awuzwanga, futhi umsindo, funa omunye esikoleni. Ngaphezu kwalokhu, ukuhlangana komfundisi, ambheke. Kumelwe wenze okuvelayo omuhle kuphela. Kufanele futhi akutshele mayelana izici ingane yakho: ubuntu bakhe, ngokubheka izinga exhumana amakhono nokuthuthuka, imininingwane yokuziphatha.
Ukuzijwayeza ingane enkulisa incike onjani kokuqala iphuma ingane. Okokuqala, khumbula ukuthi, kokuba ithole khona ingane, musa bakha ingalo yakhe ngobudlova uyakulethwa basiyeka wedwa. Okokuqala, kungcono ukuba naye: ake kid ukuze balukhulume futhi ngeke usaba wesabe. Qiniseka ngenjongo yokumbonisa ukuthi uzobuya amthathe.
Kubalulekile e okuvalelisa hhayi uyephuza yokuvalelisa. Ukukhathazeka ebusweni bakho ezizophasiswa izinyane, futhi akafuni ukuba ahambe. Uma ingane kunzima ukuba ahlukane nonina, kungcono ucele namasonto amabili okuqala kayise, ukuthi wasusa indodana noma indodakazi.
Ukuze yenza ingane enkulisa kuphumelela, ungakwazi lona ngethoyizi ozithandayo. Khona-ke, ukuthi yena uyavumelana yini ukuba amshiye ebusuku, bawuthwale nawe nsuku zonke.
Ngezinye izikhathi kuvela izimo ezinjalo lapho ingane engafuni ukwamukela uthisha, ekhononda futhi akafuni ukuba sikhulume naye. Kulokhu, uma isimo esibucayi, zama kwisi elinye iqembu. Ungenzi kuye ahlupheke futhi nakho: ke kubathinta kabi psyche ingane.
Khumbula ukuthi ingane kumele kwenziwe sabaqalayo ngaye ukudlala bese uxhumana ontanga yabo. Akumelwe sikhohlwe ukuthi engadini kanye nomndeni - izinto ezimbili ezahlukene. Uma ungafuni ukuya mayelana izingane zabo futhi ematfuba ekutfutfukisa nemfundo enkulisa ngokuphelele, ngeke zibulale izingane zakho. Badinga uthando lwabazali kanye enkulisa - it is kuphela kweyunithi elisizayo, hhayi okuphambene nalokho.
Iphalishi Dairy-mahhala yokudla lokuqala: ukukala, abakhiqizi kanye nokubuyekeza
Clover: izakhiwo ewusizo kanye contraindications. Flowers of clover: ayelapha
"Abaktal": imfundo manual kanye kancane kwemithi
Isaladi Simple - a godsend ngoba uwayehlalise
"Cybernetics Yezokwelapha ': okukhethekile. Uyini cybernetics yezokwelapha